10 नेतृत्व तत्व तत्व (पीबी वा परमाणु संख्या 82)
10 नेतृत्व तत्व तत्व
लीड मेटलको बारेमा दिलचस्प गुण
लीड एक भारी धातु हो जुन तपाईं रोजमर्राको जीवनमा ठुलो , दायाँ काँचका सञ्झ्याल र सम्भवतः तपाईंको पेय पानीको सामना गर्दछन्। यहाँ 10 नेतृत्व तत्व तथ्यहरू छन्।
दिलचस्प नेतृत्व तत्व तत्व
लीड मा परमाणु संख्या 82 छ, जसको अर्थ प्रत्येक नेतृत्व परमाणु को 82 प्रोटोन छ। स्थिर तत्वहरूका लागि यो उच्चतम परमाणु संख्या हो। प्राकृतिक नेतृत्वमा4स्थिर आइसोटोजको मिश्रण समावेश छ, यद्यपि रेडियोइस्टोपोन पनि अवस्थित छन्। तत्वको नाम "नेतृत्व" धातुका लागि एङ्ग्ल्याक-सक्सन शब्दबाट आउँछ। यसको रासायनिक प्रतीक Pb हो, जुन शब्द "प्लम्बम" मा आधारित छ, नेतृत्वको लागि पुरानो ल्याटिन नाम।
लीडलाई एक आधारभूत धातु वा पछि-संक्रमण धातु मानिन्छ। तातो कटनी हुँदा यो चमकदार नीलो-सेतो धातु हो, तर हावामा अँध्यारो खैरोमा ओक्साइड हुन्छ। यो पिघलाउँदा चमकदार क्रोम चांदी हो। जबकि नेतृत्व धेरै अन्य धातुहरु जस्तै घना, नुनीला , र निस्तारनीय छ, यसको यसको धेरै गुणहरू होइन "धातु" मा विचार गर्दैनन्। उदाहरणको लागि, धातुमा कम पिघ्ने बिन्दु छ (327.46 हे सी) र बिजुलीको खराब कंडक्टर हो।
लीड एक धातु हो जुन प्राचीन मानिसलाई चिनिन्थ्यो। यो कहिलेकाहीं पहिलो धातु भनिन्छ (यद्यपि पूर्वीहरूले सुनको चाँदी र अन्य धातुहरू पनि जान्दथे )। अल्टिमिस्ट ग्रह शनि संग धातु सम्बन्धित र सुन मा सुन ट्रांसमिशन को लागि खोज को।
आजको उत्पादनको आधा भन्दा बढि नेतृत्व लिड एसिड कार ब्याटरहरुमा प्रयोग गरिन्छ। जबकि नेतृत्व हुन्छ (शायद नै छ) प्रकृति मा शुद्ध रूप मा, आज को उत्पादन को अधिकांश को पुनर्नवीनीकरण बैटरी देखि आउछ। लीड मिनरल गैलेना (पीबीएस) मा पाइन्छ र तांबा, जस्ता, र चाँदी को अक्षहरु।
लीड अत्यधिक विषाक्त छ। तत्वले मुख्य रूपमा केन्द्रीय तंत्रिका प्रणालीलाई असर गर्छ । यो बच्चाहरु र बालबालिकाहरु लाई विशेष गरी खतरनाक छ, जहाँ नेतृत्वको जोखिम विकास गर्न सक्दछ। लीड एक संचयी जहर हो। धेरै विषाक्तहरु को विपरीत, वहाँ वास्तव में नेतृत्व करने के लिए कोई सुरक्षित जोखिम स्तर नहीं है, भले ही यह बहुत ही सामान्य सामग्री में मौजूद है।
लीड एकमात्र धातु हो जुन थामसन प्रभाव शून्य प्रदर्शन गर्दछ। अन्य शब्दहरूमा, जब नेतृत्वको नमूना मार्फत विद्युत प्रवर्तित पारित हुन्छ, तापनि न त अवशोषित हुन्छ र नराम्रो हुन्छ।
जबकि आधुनिक वैज्ञानिकहरूले तत्काल अधिकांश तत्वहरू भेद गर्न सक्छन्, यो नेतृत्व र टिन अलग गर्न गाह्रो हुन प्रयोग भएको थियो किनभने दुई धातुहरूले धेरै समान गुणहरू साझेदारी गर्छन्। त्यसोभए, लामो समयका लागि दुई तत्वहरू त्यहि धातुको विभिन्न प्रकारको रूपमा मानिन्छ। पुरातन रोमीहरूले "प्लम्बम निग्राम" को रूपमा नेतृत्व गरे, जसको अर्थ "कालो नेतृत्व" हो। तिनीहरूले टिन "प्लम्बमम नाटक" भनिन्, जसको अर्थ "उज्ज्वल नेतृत्व" हो।
काठ पेंसिलले वास्तवमा नेतृत्वमा समावेश गरेको छैन, तापनि नेतृत्व नरम हुन्छ यो लेखनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। पेंसिल नेतृत्व ग्रेफाइट एक प्रकार हो जुन रोमनले पाम्बगो भनिन्छ, जसको मतलब 'नेतृत्वको लागी कार्य' हो। नाम अटकिएको छ, तापनि दुई सामग्री फरक छ। तथापि, ग्रेफाइटसँग सम्बन्धित छ। ग्रेफाइट एक फारम वा कार्बन को सबैटोप्रो हो। नेतृत्व तत्वहरूको कार्बन परिवारसँग सम्बन्धित छ।
नेतृत्वको लागि अनगिनत प्रयोगहरू छन्। यसको उच्च जंग प्रतिरोधको कारण, पुरातन रोमीहरूले यसलाई नलसाजीको प्रयोग गरे। यो खतरनाक अभ्यास जस्तै यो आवाज, पाइप भित्र कडा पानी फारमहरू मापन गर्दछ, विषैले तत्वलाई जोखिम कम गर्दछ। आधुनिक समयमा पनि, नेतृत्व मिलाइडर वेल्डिंग नलसाजी फिक्स्चर को लागि सामान्य भएको छ। लीड इन्जिन दक कम गर्न पेट्रोलमा थपिएको छ, प्यान्ट र पेंटहरू र भवनहरूको लागि प्रयोग गरिने पेंटहरू सामना गर्न, र यहाँ सम्म कि प्रसाधन सामग्री र खानाहरू (अतीतमा) मिठाई स्वाद थप्नका लागी । यो दायाँ गिलास, क्रिस्टल, माछा सिंकरहरू, विकिरण ढाल, गोलेटहरू, स्कूबा वजन, छत, रोलेस्ट र मूर्तिहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। एक पटक पेंट अपशिष्ट र कीटनाशकको ​​रुपमा सामान्यतया, नेतृत्वको यौगिहरू अब उनीहरूको विषाक्तताको कारण कम प्रयोग गरिन्छ। यौगिकहरूको मीठा स्वादले तिनीहरूलाई बालबालिका र जनावरहरूलाई आकर्षक बनाउँछ।
धरतीको पखेटामा नेतृत्वको बहुतायत वजनमा प्रति लाख 14 भाग हुन्छ। सौर प्रणालीमा बहुतायत वजन प्रति प्रति 10 10 भाग हुन्छ।
तत्व फास्ट तथ्य
तत्व नाम : नेतृत्व
तत्व प्रतीक : पीबी
परमाणु संख्या : 82
परमाणु वजन : 207.2
तत्व श्रेणी : बेसिक मेटल या पोस्ट-ट्रांसमिशन मेटल
रूप : नेतृत्व कोठा को तापमान मा एक धातु ग्रे ठोस छ।
इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन : [एक्सई]4एफ 145डी 106एस26 पी 2
अक्साइडेशन स्टेट : सबैभन्दा सामान्य ओक्साइडेशन अवस्था 2+ हो, त्यसपछि4+ ले। 3+, 1+, 1, 2-, र 4- राज्य पनि देखा पर्दछ।
एक्टिनियम तथ्य - तत्व 89 वा एसी
रंगहरूको आधारभूत तालिका शुल्कहरूको साथ तालिका
होल्मियम तथ्य - तत्व तत्व परमाणु संख्या 67
10 निकल तत्व तथ्य
बच्चाहरु को लागि मजा ओक्सीजन तथ्य
रसायन विज्ञान मा महिलाहरु को चित्रहरु
एक सिरका र बेकिंग सोडा फोम लडाई छ
डा। एलेक्स शगो जीवनी
ईस्टरको लागि बाइबल पदहरू
ड्रग्स मा युद्ध को एक संक्षिप्त इतिहास
किन बुबाले बाइबल पाउनेछन्?
कीराहरू उनीहरूको होस्ट प्लान्टहरू कसरी पत्ता लगाउँछन्?
दोस्रो विश्वयुद्ध: इटलीको आक्रमण
सैद्धांतिक युल्ड उदाहरण समस्या
बेथेल कलेज प्रवेश
जमानत र बेण
Vitezslav Vesely: प्रोटेज देखि चैंपियन
कसरी ग्लास पेंट गर्न यो त पारदर्शी देखिन्छ
हाउरको अर्थ अर्थ र उत्पत्ति
Firearm शूटिंग मा शब्द 'राउंड' को परिभाषा
अवलोकन गरी BB-8 सँग! खिलौनेको लागि एक गाइड र अन्य BB-8 व्यापारिक
नरकका तीन चरण व्यावसायिक कुश्ती मिलान
50 औं वेडिंग सालगिरह टोस्ट